Ngaba abathengi bakho bayakuthanda? | Martech Zone
Ngaba abathengi bakho bayakuthanda?
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 12, 2014 NgoLwesibini, Februwari 11, 2014 Douglas Karr
Ngaba abathengi bakho bayakuthanda? Idatha entsha yophando evela kwiMpendulo ityhila indlela iimveliso ezinokuthi zigcine ngayo ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi kunye nokuphepha okungafunekiyo Ukwahlukana.
Uphando lweempendulo lubonisa ukuba abathengi bathatha ukungena kwiimveliso xa imiyalezo yabo iyinxalenye ye- amava omthengi acwangcisiweyo iyavela ixesha elingaphezulu, kumajelo onke nangokokuziphatha komntu kunye nokukhethwa kwakhe. Ngamaqhinga afanelekileyo kunye nezisombululo ezikhoyo, lonke unxibelelwano lwabathengi inokuba sisiqalo sobudlelwane obuhle.
Iziphumo eziphambili zophando zibandakanya:
I-73% yabathengi bafuna ukuba nobudlelwane bexesha elide kunye neempawu ezithi ubavuze ngokuba ngumthengi onyanisekileyo.
Kuphela ngama-32% athi ziimpawu abazithandayo kuphela thumela unikezelo / unyuselo abanomdla kuzo.
I-34% yabantu abadala base-US bathi banayo phukile enophawu ngenxa yobuhlwempu, ukuphazamisa okanye urhwebo olungafanelekanga imiyalezo ethunyelwe kubo.
Iipesenti ezingama-53 zabo benze njalo bathi bohlukane nophawu kuba uphawu luqhubeka lubathumela Umxholo ongabalulekanga kumajelo amaninzi.
Ama-33% athi ukwahlukana kubangelwe yimilayezo generic kakhulu kwaye yabonakala ngokucacileyo ithunyelwe kuwo wonke umntu, hayi bona bodwa.
I-59% yabo baphando bathi ngamanye amaxesha khetha uphawu olunye lokhuphiswano kunolunye ngenxa yesithembiso okanye intengiso efunyenwe kubo.
tags: uthando lwabathengiuthandoiimpendulo
I-HeatSync: Ubuntlola boKhuphiswano lweShishini kunye noHlahlelo
zkipster: Uluhlu lweeNdwendwe iZisombululo zeMisitho kunye neeNkomfa
Feb 13, 2014 ngo-1: 46 AM
Iposti enkulu UDoug… Unenqaku apha .. Enkosi ngokwabelana! ..